Yintoni umahluku kwibhula yegusha nentwala ebomvu ehlasela iigusha – Grow Farm
Yintoni umahluku kwibhula yegusha nentwala ebomvu ehlasela iigusha
Posted on:	 Oct 2, 2019	 Last updated on:	 Oct 2, 2019	 Comments:	0	Categorized in:	Articles, Livestock Written by:	Benine Ackermann
Ibhula yegusha (Sheep Scab)
Esisifo sisifo ekufuneka sakube siqatshelwe kukhawuleziswe kwaziswe abasemagunyeni ngaso khonukuze kumiselwe imiqathango. Sibangelwa sisinambuzane esincinci ekuthiwa yipsoroptes communis ovis nekunzima okokuba sibonakale ngeliso.
Sihlasela ngaphakathi elufeleni lwesilwanyana kuthi ngenxa yokutsho tshozela kwendawo leyo ihlaselekileyo siqale isilwanyana siziqhwitshe, sizigudle de sizilume kuloondawo ngenxayoko usifumana isilwanyana side sanoboyana nakulamazinyo angapha mbili. Kumaxesha amaninzi siqalela apha entanyeni ukwehla ngamagxa ukuya kumacala apho idla ngokuzigudla ngawo igusha. Ngenxa yokukuziluma uboya buyathobeka emgangathweni kwiimeko ezinzima amabala okuxhwitheka ayavela ebomvu yaye enobumanzi. Incindi ephuma esikhumbeni ethi isakoma yenze uqweqwe iyazibonakalisa kwindawo ehlaselekileyo. Esisinambuzane siyasuka kuloondawo inoqweqwe siye emacaleni siqhubeke ngokuhlasela. Isilwanyana asilahlekelwa buboya bodwa kodwa siyehla ubunzima baso imeko yokukhula iyadodobala kwakunye nenzala ichaphazeleka.
Ibhula isasazeka ngokokuba iimpahla zidibane zigudlane ,ngokulayishwa ziinqwelo, ngokwentlanti ezifakwa kuzo,ngokweziqwengana zoboya ezijinga emacingweni nango kwaba chebi kwimpahla zabo zokucheba.
Oku kungalawulwa ngokokuba kuditshwe okanye kusetyenziswe izitofu. Xa kusenziwa amayeza avunyiweyo yaye kulandelwe imiqathango yeyeza elo kwakunye nemilinganiselo eyiyo. Ukunqanda usuleleko impahla efikayo mayinikwe ingqwalasela ibe yodwa de kuqinisekiswe okokuba ayingeni nasifo.
Ukuqhambuka kwebhula kunegalelo elikhulu kwimeko yoqoqosho kuba amazwe athenga uboya abamadolonzima ukubuthenga angade maxawambi aluvale unaniselwano ngoboya itsho ke lonto ikati ilale ziko kumafama.
Intwala ebomvu (Red Lice)
Intwala ebomvu yahlukile kodwa le idla ngokuhlasela iigusha izethu eziyinza yalapha (indigenous) yaziwa ngokokuba yi damalinia peregrina.Intwala iyabonakala idakasa eboyeni nje apha ngaphezulu kwesikhumba ngokungakumbi xa kugqitywa kuchetywa.
Intwala ebomvu idalwe yanemihlathi eyomeleleyo khonukuze ikwazi ukuluma isikhumba ibangele unxunguphalo. Ngenxa yolonxunguphalo igusha iqalisa ukuziluma,iziqhwitshe ,izigudle ibangele uboya bubebubi kubonakale amabala angenaboya.
Intwala ebomvu isasazeka ngokokuba iimpahla zidibane kodwa intwala iyakwazi okokuba ihlale iphile ngaphezulu kweveki ezintathu ngaphandle kwexhoba ithethe okokuba lonto kufuneka kuqinisekiswe okokuba iintango zicocekile ngaphambi kokuba kungeswe impahla efikayo. Kuyakuthazwa okokuba nefikayo makuqiniswekiswe okokuba ayingeni nasifo.
Intwala ebomvu iyalawuleka kangobakuba impahla iditshwe okanye kusetyenziswe amayeza agalelwa ezikhumbeni [pour – on] kuba yona ihlasela ngaphuzulu kwesikhumba. Makusetyenziswe amayeza avunyiweyo kulandelwe imiqathango. ulawulo oluqinisekileyo xa kugqitywa kuchetywa.
Intwala ibangela ilahleko emandla eboyeni ebangela okokuba amafama abenelahlako.
Previous Post Small-scale planting, fertilising made easy by Backsavers
Next Post Farm planning prioritised in Prieska